FÖRNUFTIG Sifeeyaha hawo-kharashka ee IKEA | Wararka Gadget
Sifeeyaha hawadu waxay noqdeen badeecad si aad ah loo dalbado, waxaa jira noocyo badan oo galay boos adag suuqa suuqa alaabooyinkan gaarka ah, si kastaba ha noqotee, waxay ahayd waqti ka hor inta aysan aqal-galka guryaha ee Iswiidhan u imaan inay dimoqraadiyeeyaan wax soo saar loogu talagalay joog guryo aad u tiro badan.
IKEA waxay billowday FÖRNUFTIG, oo ah qiimo burburin hawo hawo leh awoodo waaweyn iyo miirayaal aad u jaban, waxaan si qoto dheer ugu falanqeynay Nala joog oo baro sababta wax soo saarkan IKEA u noqon karo kan ugu iibsiga badan oo u istaaga alaabada ugu qaalisan.
Sida munaasabadaha kale, waxaan go'aansanay inaan lasocno falanqayntaan faahfaahsan ee fiidiyoow ah oo aad ku arki doontid unbxoing ee hawo nadiifiyaha IKEA, laakiin inbadan, waxaan ku tusinaynaa sida ay u shaqeyso, sida aad u badali karto miirayaasha iyo dabcan dhamaan faahfaahinta sida heerka buuq ee ay awood u leedahay sameynta. Marka Waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso fiidiyowga oo aad ka faa'iideysato fursad aad ugu biirto kanaalkeena, halkaas oo aan ka sii wadi doonno inaan soo dejino falanqeyn aad u xiiso badan oo ku saabsan alaabada guriga taas oo kuu fududeyn doonta noloshaada.
1 Naqshadeynta iyo qalabka: Qaabka runta ah ee 'IKEA'
2 Noocyada kala duwan ee miirayaasha iyo awoodda wax lagu nadiifiyo
3 Heerarka isticmaalka maalinlaha iyo dhawaqa
Naqshadeynta iyo qalabka: Qaabka runta ah ee 'IKEA'
Haddii wax shaqeeyaan ha taaban, taasina waa wax taas ah IKEA way iska cadahay naqshadeynta iyo agabyada alaabooyinkaas aan si fudud ugu xirneyn alaabta guriga. Dhamaan qalabkeeda guriga, codka ama qalabka gadaget waxay ku tiirsan yihiin isla balaastik, isku midab oo isku mid ah, taasna waxay naga caawinaysaa inaan abuurno jawi midaysan oo astaamo leh. sida aad ku arki karto dib-u-eegistayada nalalka iyo kuwa ku hadla ee IKEA loogu talagalay Sonos. Xaaladdan oo kale waxay leeyihiin oggolaanshahayga, laakiin heer yar oo la yaab leh.
Cabirrada: X x 45 31 11 cm
Miisaanka: 3,92 Kg
Waxaan ku sharadeynaa caag cad ama madow si aan ugu haboono macaamilka iyo muraayadda hore ee dharka cawlan, si sahlan looga saari karo. Dhammaan agabyadani waxay ku daraan fudeyd, iska caabin iyo fudeyd alaabta, kana fog raadinta dareen premium, waxa ay rabaan waa in la hagaajiyo qiimaha iyo cimri dhererkiisa. Dhabarka gadaashiisa waxaan ku leenahay taageerooyin, iyo Sifeeyaha hawada ee IKEA waxaa loo dhigi karaa mid toosan iyo mid toosan, ku dhegsan gidaarka ama gebi ahaanba la qaadi karo iyada oo lagu darayo nacnaceeda iyo taageerada cagta oo gebi ahaanba ku jirta sanduuqa oo u dhiganta midabka sheyga.
Sanduuqa waxa ku jira kartoon u adeegta calaamado loogu dhejinayo darbiga (ha tuurin)
Labada laad (oo ay ku jiraan) iyo naylka gacanta waa la isku habeyn karaa
Labada nayil nalka iyo taageerada cagta labadaba si buuxda ayaa loo sameeyaa La saari karo, taas oo fududeyn doonta isbeddelada fikradda ee xagga qurxinta. Gadaasha dambe waxaan ku lahaan doonnaa hage isku xiran oo noo ogolaanaya inaan siino boosas kala duwan iyadoo aan loo baahnayn inaan aragno fiilooyin ka laalaada derbiyada. Xariggan, dhanka kale, waa mid deeqsi ah wuxuuna leeyahay adabtarada awoodda gaarka ah ee lahaanshaha astaanta.
Noocyada kala duwan ee miirayaasha iyo awoodda wax lagu nadiifiyo
Xaaladdan oo kale sifaynta hawada FÖRNUTFIG oo ka socda IKEA Waxaa loo isticmaali karaa labadiisa shaandheeye isku mar, ama kaliya shaandhada ugu weyn. Tani waa sababta oo ah mid ka mid ah ayaa ku jira xirmada kan kalena waxaa loo iibsan doonaa ikhtiyaar haddii aan rabno. Kuwani waa labada shaandhood ee ka kooban sifaynta hawada ee IKEA
Filter HEPA 12: Waxaan leenahay shaandho deeqsi ah oo kujirta cabir aad u tiro badan, shaandhadaani waxay soo nuugtaa 99,95% ee walxaha hawada sida manka, waxay leedahay waxtarka ilaa PM2,5, taas oo macnaheedu yahay inay haysaa walxaha ka weyn 2,5 nanometer. Tan waxaa loo iibsan doonaa si gooni gooni ah laga bilaabo 5 euro si toos ah IKEAhase yeeshe, cutub ayaa ku jira xirmada.
Filter Gaas: Kani waa shaandhayn gaar ah oo loogu talagalay in lagu yareeyo joogitaanka urta iyo qiiqa, halkii looga gol lahaa in lagu abuuro dareen nadiif ah iyo daahirnimo xagga hawada ah, laakiin iyada oo aan la hayn qaybaha. Shaandhayntani marwalba waxay yeelan doontaa astaamo "dheeraad ah", waana sababta loogu kala iibsaday si gooni ah. laga bilaabo 10 euro sidoo kale dukaamada IKEA. Tani waxay nadiifisaa hawada iyadoo laga saarayo waxyaabo kala duwan wasakhda hawada sida VOCs iyo formaldehyde.
Qalabku wuxuu ku shaqeyn doonaa dalabka, taas oo ah, waa inaan ku shaqeyno. Ma laha nidaam falanqeyn hawleed ama digniino dhaafsiisan tilmaamaha LED-ka ee xaaladda nadiifinta miirayaasha iyo badhanka RESET ee loogu talagalay daboolka hore ee daboolka. Marka aan helno taas cad, waxaan ka helnaa saddex heer oo Nadiif ah iyada oo loo marayo roulette-ka xagga sare. Xaaladda kicinta awoodda ugu badan, heerka qiiqa hawada ee bilaashka ah ee walxaha (CADR qiimaha) waa 130 m3 / h.
Heerarka isticmaalka maalinlaha iyo dhawaqa
Heerarka sanqadhu waxay si toos ah ugu xirnaan doonaan heerka awoodda loo qoondeeyay, heerka ugu hooseeya ee dhawaqu ku dhow yahay lama dareemi karo (waxaa laga arki karaa fiidiyaha kore), hase yeeshe, heerka sawaxanka ee awooda ugu badan waxay lamid tahay tan taageere dhaqameedka awooda yar. Sidaa darteed, heerka ugu hooseeya wuxuu u oggolaanayaa nolol maalmeedka caadiga ah iyo xitaa la seexashada iyada oo la hawlgeliyo, maaha heerkeeda ugu sarreeya, oo u muuqda mid loogu talagalay xaaladaha qiiqa ama manka xad-dhaafka ah. Tani waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta caafimaadka iyo nolol maalmeedka dadka xasaasiyadda ku leh.
Isticmaalka maalinlaha ah Sifeeyahaan wuxuu soo saaraa isticmaal maalinle ah inta udhaxeysa 2,5 iyo 19 watts, wax yar, sidaa darteed waa inaan ka walwalin qaybtaan. Waa in la ogaadaa in xarigga isku xirnaanta uu yahay mid deeqsi ah oo wax qabadkuna ay aad iigu fududdahay tijaabooyinkayga si aan ugu sii qaado qolalka kala duwan. Adeegsiga ku dhowaad 45 daqiiqo qolka saddexda miirayaasha ah ayaa gebi ahaanba baabi'inaya urka xun ee subaxa caadiga ah, Sidoo kale, qalliin la mid ah oo jikada ka dhacay ayaa gabi ahaanba baabi'iyay urta cuntada. Si kastaba ha noqotee, si faahfaahsan loo ogaado natiijooyinkeeda marka la eego manka iyo walxaha kale waxay lagama maarmaan u tahay in la falanqeeyo hawada waqtiga dhabta ah, taasina waa fure u ah qiimaha la isku hagaajiyay.
Shaki kuma jiro IKEA ku soo noqo dilaaca suuqa qalab casri ah oo guriga lagu nadiifiyo, miiraha hawadan ayaa iskiis isu muujinaya oo leh naqshad saaxiibtinimo, ka dhigaysa kaliya 59 euro waxay noqoneysaa xulashada koowaad ee macaamiisha joogtada ah ee shirkada Sweden.
Ku dhejiyay: 17 Maarso 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 14 Maarso 2021
Qalabka la aqoonsan yahay iyo qaabeynta
Sifee kala duwan iyo waxtarka daahirinta
Qiimo aan laga adkaan karin
Iyadoo aan lahayn falanqeeye tayada hawada ah
Xarigga isku xirka waa mid lahaansho leh
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » FÖRNUFTIG Sifeeyaha hawada ee LOW-KHASKA IKEA
Hadiyadaha Tech-ka ee ugu Fiican Maalinta Aabbaha